Migging a Geospatial platform over 10 afọ mgbe nke a gasịrị - Microstation Geographics - Oracle Spatial - Geofumadas
Febụwarị, 2016 cadastre, Apụta, Geospatial - GIS, Microstation-Bentley, qgis
Nke a bụ a nkịtị ịma aka n'ihi na ọtụtụ Cadastre na Cartography oru, nke na 2000-2010 Microstation Geographics ike oge dị ka gbasara ohere data engine, na-atụle ihe mere dị ka ndị a:
Njikwa nchịkwa na-aga n'ihu ma bụrụ nke bara uru, maka ọrụ mmemme.
The DGN bụ ihe mara mma ọzọ na, na-atụle ya versioned na otu faịlụ, nke agbanwebeghị na 15 afọ, megidere ndị ọzọ formats nke anyị ahụwo ọtụtụ emegide nsụgharị ọ bụla afọ atọ.
Na 2002, software n'efu bụ nrọ dị anya nke ihe anyị nwere taa.
Ụkpụrụ OGC adịghị atụle ọbụna na ngwaọrụ ngwanrọ.
Akwukwo shp enwere oke maka oru ngo di elu ma ihe ndi ozo a ka emechibidoro na nkwekorita nke a na-emeghi ihe ozo.
Njikọta na ntanetị bụ onye na-emetụta ihe anyị nwere ugbu a.
N'ihi ya, imejuputa GIS dabere na atụmatụ "jikọtara CAD" bụ ezigbo azịza, n'agbanyeghị na ejiri ịchụ àjà chụọ àjà maka ebumnuche ngosi mara mma. VBA API juru eju maka mmemme njikwa azụmaahịa jikọtara na ProjectWise maka njikwa nke faịlụ anụ ahụ yana ohere iji GeoWeb Publisher maka nyocha gbasara ohere sitere na sava ahụ, agbanyeghị mbipụta a nwere ActiveX na Internet Explorer (nke n'afọ ahụ bụ otu nchọgharị).
Nsogbu a amalitebeghị nke nta nke nta na kama ịkwaga na Geospatial Server ma ọ bụ nsụgharị siri ike nke ProjectWise, na-achọ ime ka GIS lanarị faịlụ anụ ahụ, na-enwe ikike niile nke ikike Oracle Spatial na ikike ịzụlite. Yabụ na nke ahụ bụ nsogbu anyị.
1. The nchekwa data: Postgres, SQL Server ma ọ bụ Oracle?
Karịsịa, m ga-ahọrọ nke mbụ. Mana mgbe ị nọ n'ihu sistemụ azụmahịa na-esiteghị na ọrụ mana na-arụ ọrụ nke ọma, nke akụkụ nke mgbagha na iguzosi ike n'ezi ihe dị ka PL na nchekwa data, mgbanwe na ntọala OpenSoure abụghị ihe mberede. Mba, belụsọ na ebum n’uche gị bụ imepụta ụdị sistemụ ọhụrụ nke na-adịghị n’otu oge.
Ọ bụghịkwa ime ihe Taliban iji wedata ihe niile na-esi isi. Ya mere, ịnọnyere Oracle bụ mkpebi amamihe dị na ya, ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ nke ọma, ọ bụrụ na ọ buru ibu ma na-achọsi ike, ọ bụrụ na e mepụtara ya nke ọma, chebe ya ma ọ bụrụ na a na-akwado nkwado ahụ. Isiokwu maka oge ọzọ.
Ya mere, ihe fọdụrụ bụ ịzụlite ọrụ maka data ịkwaga na nke a, ọrụ mbipụta na ọrụ njikwa azụmahịa azụmahịa.
Iji chịkwaa ọrụ na ọrụ, bụ nke a na-achịkwa na ProjectWise n'oge gara aga, e kere ngwaọrụ dị iche iche nke kwere ka:
Jikwaa ndị ọrụ na ọrụ site na BentleyMap VBA.
Nye onye ọrụ ya ikike ikike nlekọta, ikike na ngalaba na obodo.
Nye ya ikike faịlụ faịlụ ọ bụla.
Ikike ngwaọrụ dị na Mwube, mbipụta, mbipụta, ndụmọdụ na nchịkwa nchịkwa. N'ụzọ dị otú a, ọ bụ naanị ngwa ọhụrụ ka emepụtara ma pụta n'ihu ndị ọrụ dịka ọrụ ha ma ọ bụ ọrụ ha.
Ogwe nbanye a na-eme ka mgbagwoju anya nke ọrụ BentleyMap dị mfe, dịka na ntinye nke edemede na àgwà osisi akọwapụtara na Ọchịchị Geospatial na-egosi naanị site na itinye ya.
Otu panel nke a na-edozi nghọtahie na ihe egwu nke ndị ọrụ ọhụụ na atụmatụ dịka Data Interoperability. Kedu nke ọzọ bummer, ebe Bentley na-edezi edezi na Oracle Spatial, nke magburu onwe ya ma dịkwa egwu ma ọ bụrụ na ịnweghị njikwa azụmahịa.
Ya mere, dịka ọmụmaatụ, usoro ihe owuwu ahụ nwere ihe ndị a:
Geographic Linking Assistant
Migration Mgbanwe nke Ihe
Ịbupụ Shp / CAD
Ejiri nwayọọ nwayọọ tinye ngwaọrụ ndị ahụ, tinyere ụfọdụ ka ha dezie onye nchịkwa Geospatial.
Onye nchịkwa na-ele atụmatụ
Ntugharị Ntugharị na LineString
Dezie ihe ngosi Xfm
Dezie usoro Xfm
Wepu atụmatụ Xfm
Ịme ihe site na klas
Na-atụgharị site na ndepụta na-adịghị mma
2. The Data: Mbugharị si DGN ka gbasara ebe: Oracle Buider ma ọ bụ Bentley Map?
Ihe ịma aka kachasị mma na nke a bụ, na a chọrọ mwegharị a na-achịkwa, na-eburu n'uche na faịlụ DGN emeliteela maka ihe karịrị afọ 10 nwere ike inwe nsogbu onpology - ezigbo nzuzu -.
N'ezie ọ bụ. Isi nsogbu nke eserese ndị a bụ:
Mgbanwe nke a ibé na ókè-ala faịlụ (ndi oru ma ọ bụ mpaghara) na-egosi na a ga-enwerịrị mgbanwe nke abụọ, tinyere abịa ọnụ na mgbe dị ka mgbe a oru bụ otu ahịrị ma na ha gbara agbata obi na akara na-segmented.
Enwere faịlụ na mgbe ejiri 300 rụọ ọrụ echekwara n'akụkọ ihe mere eme nke DGN nwere ike merụọ.
E nweghị ihe mgbagwoju nsogbu gh kabinet, dị ka mgbe onye ebe overlaps na onye agbata obi ọzọ na ọzọ faịlụ, maka ichekwa na-apụghị kpebiri na map n'ihi na ọ ga-apụta na ubi nnyocha iji zere na-emetụta a ọzọ.
Omume ọjọọ, dịka nsonye nke map dị iche iche, na nke a, e nwere ndị natara NAD27, ọ bụ ezie na ọkọlọtọ bụ WGS84. N'okwu dị oké njọ, e mere mgbanwe n'etiti data site na esemokwu dị iche iche, na-agbagwoju anya.
Ihe ngwọta bụ ngwá ọrụ Wizzard maka mwepụ nke uka, nke nwere ike ịkwaga n'otu n'otu na map, ọtụtụ ma ọ bụ obodo niile (ọnụ ụlọ obodo) ma ọ bụ ngalaba.
N'ụzọ bụ isi ihe ngwá ọrụ ahụ na-eji data Geographics rụọ ọrụ ma na-akwalite ha na atụmatụ nke Benltey Map, mgbe ahụ na-eme ọtụtụ usoro nkwado, dị ka:
Otu n'otu mmekọrịta dị n'etiti geometry na nchekwa data,
Ndebanye aha nke enweghi mpempe akwụkwọ,
Validation nke mpaghara-centroid agbanwe agbanwe,
Ihe nkwado nke ihe odide map banyere ihe anaghị arụ ọrụ na nchekwa data,
Ntughari nkwado nke ndi mmadu di iche iche na-akwanyere onpologies di na isi ihe
Mgbe nkwenye ahụ, panel ahụ na-enye ohere itinyekwu ozi na ụzọ dị oke mkpa, dịka usoro ntụgharị na njikwa akara nke data ahụ.
N'ikpeazụ, ziga na nchekwa data, n'ikpeazụ ịmepụta akụkọ. Site n'ikwu na eziokwu enwere nnukwu agbatị, mana n'ikpeazụ ọ gbanwere ka uche nke Oracle Spatial nke ka dị ka nke Bentley na ụzọ ha si ahụ ihe ndị dị mgbagwoju anya ma ọ bụ ọtụtụ oghere.
3. Akwụkwọ ahụ: Geoserver ma ọ bụ MapServer? OpenLayers ma ọ bụ mpempe akwụkwọ?
Ewubere onye na-ekiri ihe site na iji OpenLayers na ụfọdụ plugins. Na nke mbụ mgbe afọ iri nke nleghara anya maka mmepe nke akụkụ mbara igwe, a hụrụ onye ọhụụ ọhụrụ nke dochiri ActiveX nke GeoWeb Publisher. Ejiri koodu MapFish maka ibipụta, geojson iji chịkwaa akụkụ osisi ahụ, site na Geoserver ka e nyere usoro ndị ejiri OracleSpatial rụọ ọrụ.
N'ikpeazụ, a gbanwere nzụpụta teknụzụ dị ka ihe na-esonụ. Dị ka ị nwere ike ịhụ, koodu nchịkọta ọnụ, nke na-edebe nchekwa data na nchịkwa ala site na iji ngwanrọ.
4. Mee ma dezie, gaa na Oracle Spatial. Map Bentley ka ọ bụ QGIS?
Nke a bụ akụkọ ọzọ. Bentley Map na-edezi edezi na mbara igwe, nke na-akpata esemokwu ma ọ bụrụ na ọ gaghị arụ ọrụ na Ọrụ Ntanetị Web Transactional (WFS). Esemokwu ahụ bụ:
Otu esi edozi iwu nke ikwe ka onpology ghara idi ndu, ma oburu na edezi ya na mgbe ichoro igbasa akuko na ihe ahu na emetuta onwe ya?
A na-edozi nke a site na ntinye edezi, na-edezi ozugbo ma na-ekwenye na mgbe ị na-ezipụ, ọ bụrụ na ihe adabere na mbipụta ahụ agbapụtala na-ahapụ ọrụ ahụ mechara ma na ala dara.
Nsogbu ọzọ nke a ga-edozi bụ nnukwu ntinye data, na-atụle na ndị ọrụ ga-akwụsị iji Geographics ma nwee ọtụtụ ọrụ na-emepụta nnukwu cadastre.
Nke a dị mfe n'ihi na ọ bụ naanị ngwá ọrụ yiri nke a mere iji jikọta data na Microstation Geographics, na-enyere ndị BentleyMap aka na onye na-enyere ndị ọzọ aka.
The image na-egosi otú nke a na ngwá ọrụ e mepụtara, na ụfọdụ peculiarities, dị ka ihe e kere eke na ndebanye aha na nke vertices na Nsonye nke Puntoparcela ka arụmọrụ ndepụta bụrụ na usoro nke ji atụ ụfọdụ vertices izute ụfọdụ àgwà ọkọlọtọ.
N'ezie, usoro a dị ezigbo mma, n'ihi na ndị ọrụ maara ụdị ngwaọrụ ha na-ejikarị. Ọ dị mkpa ime ka ha gbanwee echiche ha n'etiti ịkwaga site na ọtụtụ atụmatụ gaa njikwa site na ọkwa, na-akwalite abamuru ọhụrụ ka ha wee chefuo ihe ochie Microstation V8 2004, dịka ọrụ WMS, nghọta na nnabata nke faịlụ DWG nke ụdị ndị a na-adịbeghị anya; ghara ịkọwa mmekọrịta na kml, shp na gml maka kpakpando kachasị.
Ejiri nhata ka e ji rụọ ọrụ maka nlekọta cadastral, inwe nhọrọ nke edezi aha na nhazi ma ọ bụ belata ha na arc-node maka okwu dị mgbagwoju anya.
5. Onye ahịa maka obodo site na GML. QGIS ma ọ bụ gvSIG?
QGIS. Ma nke ahụ bụ akụkọ ọzọ ịkọ ọzọ.
Previous Post«Previous Ala na-ejikarị atụmatụ eserese na Latin America na Caribbean
Next Post The Twilight n'ọtụtụNext »